သားလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ ရှေ့ရေးကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာ ပရိသတ်တွေကိုပြောပြလာတဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ် ဗီဒီယို….. – Cele Oscar
သားလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ ရှေ့ရေးကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာ ပရိသတ်တွေကိုပြောပြလာတဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ် ဗီဒီယို…..
March 29, 2022 By L YC Knowledge
မွနျမာဇာတျလမျးတှမှော ဇာတျပို့နရောနကေနေ ကောငျးကောငျးသရုပျ ဆောငျနိုငျတဲ့ နှိုငျးယှဉျမွငျ့မိုရျနဲ့ ကိုဘငျးတို့ ဇနီးမောငျနှံက‌တော့ လူတိုငျးသိကွမယျထငျပါတယျနျော.. နှိုငျးယှဉျတို့ကတော့ အှနျလိုငျးကနေ Live လှငျ့ပွီးစြေးရောငျးပေးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ အပွောခြိုခြိုလေးနဲ့ စြေးရောငျး တတျတာကွောငျ့လုပျငနျးရှငျတှကေလညျး အလုပျအပျတာတှမြေားလှနျးတာကွောငျ့ အခြိနျ တှတေောငျမလောကျတတျဘူးလို့လညျး အငျတာဗြူးတှမှော ဖွထေားခဲ့ပါသေးတယျ။
သူမတို့ဇနီးမောငျနှံတော့ အလုပျတှကေို ကွိုးစားတာကွောငျ့ အရမျးလှပတဲ့ အိမျကွီးတဈလုံးကိုလညျး ကာလတို အတှငျးမှာ ဝယျနိုငျခဲ့သူတှဖွေဈတာကွောငျ့အားလုံးကအားကနြခေဲ့ရသူတှလေညျး ဖွဈပါတယျ။ မကွာခငျကာလတုနျးက နှိုငျးယှဉျမွငျ့မိုရျက သားငယျလေး ကိုမှေးဖှားထားတာဖွဈပါတယျနျော.
.ဒီနလေ့ေးမှာတော့ နှိုငျးယှဉျက သားလေးနှဈယောကရဲ့ ရှရေ့ေးနဲ့ပကျသကျလို့ သူမရဲ့ခံစားခကျြ နဲ့ ရညျမှနျးခကျြတှကေို ပွောပွသှားပါတယျနျော…. ပရိသတျကွီးလညျး နှိုငျးယှဉျပွောသလိုပဲ ကိုယျခငျြးစာစိတျလေးနဲ့ ဖေးမပေးကွပါအုံးနျော…
crd Cele info
မြန်မာဇာတ်လမ်းတွေမှာ ဇာတ်ပို့နေရာနေကနေ ကောင်းကောင်းသရုပ် ဆောင်နိုင်တဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်နဲ့ ကိုဘင်းတို့ ဇနီးမောင်နှံက‌တော့ လူတိုင်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်.. နှိုင်းယှဉ်တို့ကတော့ အွန်လိုင်းကနေ Live လွှင့်ပြီးဈေးရောင်းပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြောချိုချိုလေးနဲ့ ဈေးရောင်း တတ်တာကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်း အလုပ်အပ်တာတွေများလွန်းတာကြောင့် အချိန် တွေတောင်မလောက်တတ်ဘူးလို့လည်း အင်တာဗျူးတွေမှာ ဖြေထားခဲ့ပါသေးတယ်။
သူမတို့ဇနီးမောင်နှံတော့ အလုပ်တွေကို ကြိုးစားတာကြောင့် အရမ်းလှပတဲ့ အိမ်ကြီးတစ်လုံးကိုလည်း ကာလတို အတွင်းမှာ ဝယ်နိုင်ခဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့်အားလုံးကအားကျနေခဲ့ရသူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်ကာလတုန်းက နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်က သားငယ်လေး ကိုမွေးဖွားထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်.
.ဒီနေ့လေးမှာတော့ နှိုင်းယှဉ်က သားလေးနှစ်ယောကရဲ့ ရှေ့ရေးနဲ့ပက်သက်လို့ သူမရဲ့ခံစားချက် နဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကို ပြောပြသွားပါတယ်နော်…. ပရိသတ်ကြီးလည်း နှိုင်းယှဉ်ပြောသလိုပဲ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေးနဲ့ ဖေးမပေးကြပါအုံးနော်…
ကိုယ်ကျိုးအတွက် အလွဲသုံးစားလုပ်နေတဲ့ Page အတုကို Report ထုပေးဖို့ ပရိသတ်ကို အကူညီတောင်းလာခဲ့တဲ့ မေမီကိုကို…..
အမိုက်စား အလန်းစားဓါတ်ပုံတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကိုဆွဲဆောင်လိုက်တဲ့ လူကြမ်းသရုပ်ဆောင် ဦးမျိုးကြည်……